Ataon’ny Makedonianina Vazivazy Ny Mikasika Ilay Fifanolanana Amin’i Gresy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2018 2:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Deutsch, 日本語, Italiano, English
“Boum, boum…” – sary mampihomehy iray nataon'i Darko Markovikj mitantara ny fahitany ny don-tratran'ny nasionalista makedonianina, navoakan'ny Citizens for European Macedonia tamin'ny 2011. Nahazoana alàlana.
Raha heverin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena any amin'ny Repoblikan'i Makedonia ho raharaha matotra ny fifandirana mikasika ny fanomezana anarana miaraka amin'ny Gresy, ny sasany kosa dia maneho izany amin'ny hatsikana sy ny fanesoana (sariitatra ).
Mbola nohasarotin'ny ato tsy azo ivalozana avy amin'ny grika tamin'ny fifanolanana momba ny anarana ny fidiran'ny Repoblikan'i Makedonia ao amin'ny vondrona eoropeana sy ny Fikambanan'ny Fifanarahana any Atlantika Avaratra (OTAN) raha tsy ovainy ny anarany mba hanavahana azy amin'ireo fari-pitantànany avaratra. Nahatonga ny fihanaky ny fankahalàna vahiny teo amin'ny firenena roa tonta izany. Ny ankamaroan'ny olom-pirenen'ny RM dia mihevitra ilay sakana ho fandrahonana manala baraka, raha mino kosa ny ankamaroan'ny olom-pirenena grika fa miandrandra fandresena ireo mpifanolo-bodirindrina ao avaratra.
Samy nandranitra ny fahatsapana fahafaham-baraka sy fahasorenana tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny olana mba hahazoana tombony ara-politika amin'ny dingana “fitiavan-tanindrazana” ireo Nasionalista avy amin'ny firenena roa tonta. Vokany, nety tamin'ny paikadin'i Rosia amin'ny hanakanana an'i Balkana tsy hivondrona amin'ny vondrona eoropeana sy ny OTAN ny fitohizan'ny fifanolanana amin'ny fanomezana anarana.
Ny hany teboka iraisana momba ny olan'ny fanomezana anarana eo amin'i Makedonia sy Gresy dia tsy raharaha mampihomehy izy ity. Tato anatin'ny ampahefatra taonjato farany, dia tsy misy dikany ny votoaty maneso na mampihomehy raha oharina amin'ny fanehoankevitra mampikorontana sy lahateny feno fankahalàna. Na fanahy iniana na tsia, dia matetika no adika vilana ho kabary fankahalàna ny eso.
Niaraka niasa tamin'ny haino aman-jery mpamoaka vaovao tsy miankina lehibe ilay mpanao sariitatra Darko Markovikj (na soratana koa hoe Marković, 1940-2016), mandra-pifanaraky ry zareo na nakaton'ilay governemanta nasionalistan'i VMRO-DPMNE (nanjaka 2006-2017), tarihin'ilay lehilahy mahery Nikola Gruevski.
Tamin'ny 2009, tamin'ny fotoana nampidiran'i Gruevski ireo olan'ny fiteny sy ny maha-izy azy ny foko makedoniana tao amin'ireo fifanarahana momba ny fifanolanana amin'ny fanomezana anarana, dia efa novinanian'i DarMar ny hampifamatorana izany tamin'ny faniriana fitondrana :
“Momba ny OTAN aho… Momba ny Firaisambe Eoropeana aho… Saingy laviko ny hanary ny maha-izaho ahy !” – sariitatra nataon'i Darko Markovikj naparitaky ny Citizens for European Macedonia. Nahazoana alàlana.
Nampifanoherin'i DarMar tamin'ny kabary nasionalista tsara lahatra mampiady hevitra izany raha toa tokoa ka manan-jo hitaky ny maha-taranak'ireo Makedoniana fahagola azy ny foko Makedoniana ankehitriny, sa ireo Slavs tatsimo ‘ihany’ izay tonga tao amin'ny faritra 1.600 taona lasa izay, ary ankehitriny mbola heverin'ireo nasionalista grika fa ‘vao tonga’ :
“Tsy Makedoniana fahagola intsony aho …… tsy makedonianina Slav ihany koa ..!” – “inona ary ianao amin'izao fotoana izao ?” – ” amin'izao fotoana izao aho dia makedoniana voroaka tamin'ny asa.” Sariitatra nataon'i Darko Markovikj navoaka tamin'ny Citizens for European Macedonia. Nahazoana alàlana.
Vao haingana kely, ny fandaharana fanesoana naseho tamin'ny fahitalavitra ” Ny Vaovaon'ny Omaly” (“Fcerasni novosti” amin'ny teny makedonianina ) dia nanao vazivazy ilay adihevitra momba ny fanomezana anarana tamin'ny alàlan'ny tantara kely miendrika Monty Python.
Tamin'ity herinandro ity, raha tsindrian-daona miandry ilay efatra andro faran'ny herinandro lava manodidina ireo andro tsy fiasàna roa lehibe eo amin'ny firenena, manomboka ny 24 May ireo makedoniana, ireo antoko mpanohitra kosa, nandà tsy nanaiky ilay sosokevitra famahàna ny olan'ny fanomezana anarana naroson'ny makedoniana sy ny Praiminisitra grika. Nataon'ilay mpisera iray tao amin'ny twitter vazivazy ny ho ‘ fiantraikan'izany’ amin'ireo mpanao fialantsasatra :